သုံးနှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ချစ်ဇနီးလေးအရမ်းလိုချင်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးနားကပ်လေးကို Surprise လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်အာဘွိုင်း – Myanmar Hot News
သုံးနှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ချစ်ဇနီးလေးအရမ်းလိုချင်တဲ့ တန်ဖိုးကြီးနားကပ်လေးကို Surprise လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်အာဘွိုင်း
by lkadmin 23rd December 2020 23rd December 2020
အတူတူနေတဲ့အချိန်တွေကြာလေ သံယောဇဉ်တွေပိုတိုးလေဆိုတာ အာဘွိုင်းနဲ့ မြတ်ရတနာကျော်တို့ဇနီးမောင်နှံလေးက သက်သေပါပဲ။ ချစ်စရာသမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးနောက် မိသားစုဘဝလေးဟာ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဖေဖေနဲ့သိပ်တူတဲ့သမီးလေးဟာ အခုချိန်မှာ စကားတွေတီတီတာတာပြောတတ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး အားလုံးရဲ့အသည်းကျော်လေးလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
သုံးနှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ရင်ခုန်စရာအမှတ်တရလေးတွေ ဖန်တီးခဲ့ပုံလေးတွေကို ” ဒီနေ့ (၃) နှစ်ပြည့် Anniversary Dinner သွားစားမယ်ဆိုတော့ ကိုကိုကျော် အလုပ်တွေရှုပ်တဲ့ကြားကလိုက်ပို့တယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ ပန်းတွေဘာတွေ စီစဉ်ထားတော့ စိတ်ထဲမှာ ဒီလူကြီး ဒီလောက်တော့ လုပ်ပေးသေးတာပဲပေါ့ ” မဆိုးသေးပါဘူး ” ပေါ့ ခဏကြာတော့ ဓါတ်ပုံ သွားရိုက်မယ် အောက်ထပ်မှာဆိုတော့ ဓါတ်ပုံဆရာ ဓါတ်ဖမ်းနေတုန်း kdrama ထဲက အကွက်တွေ ထလုပ်ပါလေရော ”
” တော်တော်ကြာပြီ မြတ်အရမ်းကြိုက်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ နားကပ်လေး အမှတ်မထင် သတိတရ ဝယ်ပြီး Surprise တိုက်လို့ ကျေးဇူးပါ သမီး ၃ယောက် ဖေဖေ Love you my hubby. Happy 3rd Anniversary. Thank you Lord for the gift of marriage and blessings ” ဆိုပြီး မြတ်ကကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
သုံးနှဈပွညျ့မင်ျဂလာနှဈပတျလညျနမှေ့ာ ခဈြဇနီးလေးအရမျးလိုခငျြတဲ့ တနျဖိုးကွီးနားကပျလေးကို Surprise လကျဆောငျပေးခဲ့တဲ့ အဆိုတျောအာဘှိုငျး
အတူတူနတေဲ့အခြိနျတှကွောလေ သံယောဇဉျတှပေိုတိုးလဆေိုတာ အာဘှိုငျးနဲ့ မွတျရတနာကြျောတို့ဇနီးမောငျနှံလေးက သကျသပေါပဲ။ ခဈြစရာသမီးလေးကိုပိုငျဆိုငျထားပွီးနောကျ မိသားစုဘဝလေးဟာ ပိုပွီးပြျောစရာကောငျးလာခဲ့ပါတယျ။ ဖဖေနေဲ့သိပျတူတဲ့သမီးလေးဟာ အခုခြိနျမှာ စကားတှတေီတီတာတာပွောတတျနပွေီ ဖွဈပွီး အားလုံးရဲ့အသညျးကြျောလေးလညျးဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
သုံးနှဈပွညျ့မင်ျဂလာနှဈပတျလညျနလေ့ေးမှာ ရငျခုနျစရာအမှတျတရလေးတှေ ဖနျတီးခဲ့ပုံလေးတှကေို ” ဒီနေ့ (၃) နှဈပွညျ့ Anniversary Dinner သှားစားမယျဆိုတော့ ကိုကိုကြျော အလုပျတှရှေုပျတဲ့ကွားကလိုကျပို့တယျ။ ဆိုငျရောကျတော့ ပနျးတှဘောတှေ စီစဉျထားတော့ စိတျထဲမှာ ဒီလူကွီး ဒီလောကျတော့ လုပျပေးသေးတာပဲပေါ့ ” မဆိုးသေးပါဘူး ” ပေါ့ ခဏကွာတော့ ဓါတျပုံ သှားရိုကျမယျ အောကျထပျမှာဆိုတော့ ဓါတျပုံဆရာ ဓါတျဖမျးနတေုနျး kdrama ထဲက အကှကျတှေ ထလုပျပါလရေော ”
” တျောတျောကွာပွီ မွတျအရမျးကွိုကျတယျလို့ပွောထားတဲ့ နားကပျလေး အမှတျမထငျ သတိတရ ဝယျပွီး Surprise တိုကျလို့ ကြေးဇူးပါ သမီး ၃ယောကျ ဖဖေေ Love you my hubby. Happy 3rd Anniversary. Thank you Lord for the gift of marriage and blessings ” ဆိုပွီး မွတျကကွညျကွညျနူးနူးနဲ့ဝမြှေခဲ့ပါတယျ။